Home News Qarax Muqdisho ka dhacay iyo Qasaaro Culus oo ka dhashay
Qarax Muqdisho ka dhacay iyo Qasaaro Culus oo ka dhashay
Qarax ayaa goor dhow wax yar ka hor xiligii afurka ka dhacay agagaarka Xaruntii hore ee Kulliyadda Gaheyr oo ku taalla wadada Warshadaha gaar ahaan inta u dhexeysa Ex-kontrol Afgooye iyo hallka loo yaqaano Haanta dheer.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxan oo loo adeegsaday miino wadada lagu aasay lala beegsaday gaari dagaal oo ay la socdeen ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya.
Goob-joogayaal ayaa sheegay in qaraxaas lala waayey gaarigii ay wateen ciidamada, uuna haleelay gaari noociisu ahaa Karib oo ay la socdeen dad shacab ah.
Ugu yaraan hal qof ayaa la xaqiijyey inuu ku dhintay qaraxan, labo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo kala ahaa darawalkii gaariga iyo labo qof oo la socotay.
Ciidamada amaanka ayaa goobtaas gaaray qaraxa ka dib, waxaana muddo kooban mkala xirmay wadadaas, iyadoo baaritaano ka dib ay ciidamadu dib u fureen halkaas jidka.
Al-shabaab ayaa tan iyo markii la guda galay bisha Ramadaan kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan Magaalada Muqdisho, iyadoo ciidamada amaankuna ay wadaan howlgalo ay kaga hortagayaan weeraradaas.